लोकस्टार शनि विश्वकर्मा र हाम्रो अपेक्षा
यतिबेला रोल्पाका प्रतिभा, चम्किला नक्षत्र १८ वर्षीय शनि विश्वकर्मा देश, विदेशमा निकै चर्चामा छन् । कारण, उनले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार राशि भएको आइएमई नेपाल सिजन १ को पहिलो लोक स्टारको उपाधि हात पार्न सफल भए । यतिबेला देश विदेशबाट बधाईको ओइरो आइरहेको छ, आफन्त, शुभचिन्तकको स्वागत, सम्मान ग्रहण गर्न भ्याइनभ्याई छ । सबैको प्रिय पात्र बन्न सफल भएका छन् । उनको सांगीतिक यात्राका बारेमा विभिन्न सन्चारमाध्यमहरुमा चर्चा भइसकेका छन् । त्यसैले यहाँ त्यसको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक हुन सक्छ ।
कुनै पनि रियालिटी शोको विजेता बन्नु त्यति सहज छैन । शुरुका चरणमा निर्णायकको मन जित्नु चुनौती रहन्छ भने, अन्तिम चरणमा दर्शक, स्रोताहरुको मन जित्नु निकै चुनौति हुन्छ । किनभने धेरे यस्ता शोहरुमा अन्तिम चरणमा भोटिङकै आधारमा विजेता छान्ने प्रचलन छ । पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरुका लागि असम्भव छ भन्नेहरु पनि थिए । हुन पनि हो, हरेक शुभन्चितकको मन जित्न नसके भोटिङका लागि कसैले पनि पैसा खर्च गर्न चाहँदैन । त्यसमा पनि भौगोलिक हिसाबले केही कठिनाई, नेपालको पश्चिमी क्षेत्र त्यसमा पनि कम जनसंख्या भएको रोल्पाजस्तो जिल्लाका लागि स्टार बन्नु निकै चुनौतिको विषय बन्न सक्छ ।
लोक स्टार बन्नुमा पहिलो श्रेय शनिकै कला, गला र प्रतिभालाई जान्छ भने दोश्रो श्रेय सबै शुभचिन्तकहरुलाई जान्छ । सबैलाई वरदानस्वरुप एउटा कला, प्रतिभा प्राप्त भएको हुन्छ । त्यही आफूमा भएको जादुमय कला प्रतिभाको सदुपयोग गर्न उनी सफल भए । अडिसन राउण्डमा पहिलो गोल्डेन स्टार प्राप्त गर्दै उनी सिधै उत्कृष्ट वीसमा प्रवेश पाए । त्यसपछि आफ्नै मेहनतले विना कुनै खतरा उत्कृष्ट १२ सम्म पुग्न सफल भए । त्यसपछि भने कार्यक्रमको नियम अनुसार फाइनल चरण बाहेक असी प्रतिशत साथ उही स्रोता, दर्शक, शुभचिन्तकको चाहिने भयो । फाइनल चरणमा भने शत प्रतिशत स्रोता, दर्शक, शुभचिन्तकको साथ आवश्यक थियो । उनीसंगै अन्य चार प्रतिस्पर्धी पनि अन्तिम चरणमा पुगे । जिल्ला, देश तथा विदेशमा शनि जिताऔं अभियान चलाइए । सबैको अन्यधिक भोटिङबाट विजेता बन्न पनि सफल भए । शनिलाई विजेता बनाउन स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा सरकारी निकाय, सन्चारमाध्यम, कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी, देशविदेशका शुभचिन्तकहरु सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ जसका कारण फाइनल चरणको मात्र कुल ५७ लाख भोट मध्ये अत्यधिक भोटका साथ विजेता बन्न सफल भए । हामी भोट गर्ने सबैलाई थाहा छ, एउटा भोटको ५ देखि ७ रुपैया पर्छ । मेरो आशय पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ भन्ने होइन ।
यस खालका हरेक प्रतिस्पर्धामा आआफ्ना मन पर्ने प्रतिस्पर्धीहरु हुन्छन्, मन परेका प्रतिस्पर्धी जो कोहीलाई पनि भोट गर्न सक्छन् । अब सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ यति हुँदा हुँदै किन शनिलाई नै अत्यधिक सहयोग प्राप्त भयो ? किन अधिकांशले शनिको पक्षमा साथ दिए ? शनि रोल्पावासी भएका कारण रोल्पालीले साथ दिनु स्वभाविकै मान्न सकिने भए पनि अन्य सबै क्षेत्रका शुभचिन्तकहरुले पनि किन उनलाई नै साथ दिए ? आखिर उनका शुभचिन्तकहरु उनीबाट के चाहन्छन् ? किन अभियान्ताहरु दिनरात नभनी आफ्नै स्रोतसाधन खर्च गरेर शनि जिताऔं अभियानमा लागे ? यी प्रश्नहरको सेरोफेरोमा रहेर यो लेख तयार गरिएको छ ।
१८ वर्षको उमेरमा कलाकारिता क्षेत्रमा यस तहको सफलता हात पार्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मेरो विचारमा लोक स्टार बनेसंगै कलाकारिता क्षेत्रमा उनीमाथि धेरै चुनौतिहरु थपिएका छन् । किनकि यो सफलता नै अन्तिम होइन । उनका लागि आइएमई नेपाल लोक स्टार एउटा चम्किलो तारा बन्ने माध्यम हो । त्यसैले अबको मुख्य चुनौति भनेको ती चम्किला तारामध्ये चम्किलो जुन (चन्दमा) बन्ने हो । किनभने विगतमा नेपालमा भएका यस्ता सिंगिङ रियालिटीबाट तारा घोषित भएका धेरै ताराहरु आकाशमा देखिँदैनन् भने थोरै मात्र आकाशमा उदाइरहेका छन् । बरु अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले नेपाली सांगीकि क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको देखिन्छ । मेरो आशय प्रतियोगिता जित्नुमात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसबाट सिकेको ज्ञान, कला, सीपको प्रयोग गरेर निरन्तर संघर्ष गर्नु, नयाँ नयाँ अनुभव हासिल गर्नु महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ । म शनि विश्वकर्मामा त्यसको धेरै सम्भावना देख्छु ।
विगतमा शनिले जित्नुपर्छ, जिताउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत भए पनि शनिलाई धेरै थरिका शुभचिन्तकहरुले धेरै थरिका आशा, अपेक्षा गरेर भोट, सहयोग गरेका छन् । सबैको अपेक्षा पुरा गर्न सम्भव छ वा छैन, त्यो फरक पाटो होला । अहिलेको नयाँ पुस्ताले उनको सबै थरिका गीत न्याय दिएर गाउन सक्ने कला मन पराएको होला, पुराना पुस्तालाई उनले गाएको रोल्पाको पुराना लोक भाका साइला बरैले मन छोएको होला, कसैलाई पश्चिम क्षेत्रका पुराना लोक भाकाले मन छोएको होला, प्रदेशलाई नमुछे आमा दहीमा टीका जस्ता गीतले मन छोएको होला । ती सबै खालका आफ्ना शुभचिन्तकहरुको मन जितेर लोक स्टार बन्न सफल हुनु पहिलो सफलता हो । यो विरासतलाई कायम राख्दै अघि बढ्नु अबको चुनौति हो । एउटा भनाई छ, एउटा पहाड चढेपछि मात्र थाहा हुन्छ रे धेरै पहाड चढ्न बाँकी छ भनेर, एउटा पहाड चढेपछि अन्य पहाड चढ्ने आँट आउँछ । शनिले एउटा पहाड चढिसकेका छन् । अन्य पहाडहरु पनि चढेर कीर्तिमान कायम गर्नेछन् । त्यतिबेला आफूलाई लोक संगीतले यहाँसम्म ल्याएको भन्ने कुरा कहिल्यै विर्सनुहुँदैन ।
शुचिन्तकहरुमध्ये कसैले उनलाई रोल्पाबाट पनि राष्ट्रियस्तरमा एउटा सफल कलाकार भएको देख्न चाहेका छन्, कसैले हाम्रा पुराना लोक भाकाहरुलाई पनि राष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेका होलान्, कसैलाई रोल्पा लगायत पश्चिम क्षेत्रका नयाँ प्रतिभाहरुको प्रतिभालाई राष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । प्रदेशीहरुलाई हाम्रो दुःख पीडा गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । सहयोग गर्ने अन्यको अपेक्षा फरक पनि हुन सक्ला ।
वर्तमान समयमा कुनै पनि क्ष्ँोत्रमा दक्षता, व्यवसायिकता भएन भने अघि बढ्न कठिन हुनसक्छ । व्यवसायिक दक्षता भनेको आर्थिक रुपमा बलियो हुन आफूलाई दक्ष बनाउनुु, त्यसको प्रयोग गर्नु हो । तर व्यसायिकतासंगै जोडिने अर्को पाटो समाज सेवा, कला, संस्कृतिको संरक्षण पनि हो । एउटा स्थापित कलाकारका लागि समाज सेवा गर्न धेरै समय, आर्थिक सहयोग, धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन, थोरैले पनि धेरै हुनसक्छ । भविष््यमा व्यवसायिक कलाकारितातर्फ लागेपछि शनिले यो पाटोलाई नर्विने आशा लिएका छौं । उदाहरणका रुपमा लिँदा लुकेर रहेका प्रतिभाहरुका लागि मन्च, यहाँका स्थानीय लोक कला, संस्कृति, भाकाहरुलाई राष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन, हिजो आफूलाई सहयोग गरेर देशले चिन्ने लोक स्टार बनाउन सहयोग गर्ने सहयोगीहरु मनहरु, शुचन्तिकहरुलाई आपतविपत पर्दा गरिने सानो सहयोग पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । त्यो एउटा स्थापित कलाकारका लगि धेरै ठूलो कुरा पनि होइन ।
यति धेरै अपेक्षाहरु, सकारात्मक पक्षका बारेमा चर्चा अभियानका क्रममा भएका केही अन्य पक्षका बारेमा पनि चर्चा गर्न मन लाग्यो । शनि जिताऔं अभियानका क्रममा सहयोग जस्तोसुकै, जत्रोसुकै भए पनि सहयोग गर्ने बहुसंख्यक शुभचिन्तक, सहयोगी मनहरु भेटिए । कसैलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । सबैको केही त्यस्ता मानिसहरु भटिए, जो आगो बाल्दैनन्, बलेको आगो मात्र ताप्न खोज्छन् । तिनीहरु आफू चर्चामा आउन अनेक बहाना बनाउँछन् । हिजो कलाकारिता क्षेत्रमा शनि विश्वकर्मा एउटा आस लाग्दो पानीको मूल हुँदा आज नदी, समुद्र बन्ने हैसियतमा पुगे । पानीको मूलमा सक्दो सबैले पानी सहयोग गरे कलाकारितामा उनलाई नदी बनाउन सकिन्छ, समुन्द्र आफै बन्न सक्छन् भन्दा नपत्याउनेहरु पनि भेटिए । पहिले असहयोग गर्नेहरु लोकस्टार जितेपछि चर्चामा आउन अनेक हर्कतहरु पनि देखियो । दुई चार जना यस्ता प्रवृत्तिले केही फरक नपर्ला तर आफू फाइदा लिन खोज्ने यस खालका प्रवृत्तिसंग सधै सचेत हुन जरुरी छ ।
निश्कर्षमा उनलाई लोक स्टारको उपाधि जित्न सहयोग गरेपछि हाम्रो दायित्व धेरै हदसम्म पुरा भएको महसुस हुन्छ । लोक स्टारका माध्यमबाट ताराको रुपमा उदाएका शनिलाई जुनको रुपमा उदाएको हेर्ने शुभचिन्तकहरुको इच्छा हो । गीतसंगीतका माध्यमबाट सबैलाई जुनको उज्यालो दिएको हेर्ने इन्छा हो । होइन भने हरेक प्रतियोगितामा एउटा न एउटा तारा हुन्छन् । त्यो तारामै सीमित हुनुहुँदैन ।
लेखक रेडियो रोल्पा ९३‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌।८ मेगाहर्ज रोल्पा नगरपालिका–२, लिबाङमाा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता द्वारा सल्यान प्रहरी हिरासत र कारागारको अनुगमन
राप्ती राजमार्गको चोरखोला सडक खण्ड दैनिक ७ घण्टा बन्द हुने
मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा